मुलुकको लागि सडक र निजी घरको लागि शौचालय सभ्यताको परिचायक मान्छि । सडक व्यवस्थित छ, त्यसमा चल्ने गाडी र पेटीमा हिँड्ने बटुवा अनुशासित बनेर हिँड्छन्, नियम पालना गर्छन् भने मुलुकको
झट्ट सुन्दा अप्रिय र प्रतिगामी अभिव्यक्ति लाग्न सक्छ, तर राजनीतिक दलमा निहित कमजोरीकै कारण आज मुलुकमा व्यापक निराशा छ । चन्दा हाले उम्मेद्वारको टिकट पाउने, किन्न सके राजनीतिक नियुक्तिको कुनै
कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनले विश्वभर आतंक मच्चाएको छ । उक्त भाइरसका कारण हालसम्म कसैको मृत्यु भएको समाचार नआए पनि यसले पार्नसक्ने असरलाई लिएर विश्व त्रस्त छ । दुई साताअघि
पटक–पटक फुट्दै र जुट्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरिएकतामहाधिवेशनगर्दैछ । एकताअधिवेशन गरेको पाँचवर्षमै चार टुक्रा भएको यो पार्टी फेरि एकपटक देशभर एकीकृत हुने प्रयासमा छ ।पूर्वीय दर्शन, वैदिक परम्परा, बौद्धिकतथा
नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । तीन दिनमा महाधिवेशन सकेर एकताको सन्देश दिन खोजेको एमालेले सन्देश त दिएको छ तर पार्टीभित्र अझै पनि विवाद र असन्तुष्टि बाँकी रहेको
श्रद्धेय पाठकहरूको हातमा रहेको यस नेपाल समाचारपत्रको प्रकाशन संस्था कामना समूह आजदेखि ३८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ३७ वर्ष पार गरेको व्यक्ति वा संस्था उमेरका हिसावले परिपक्व मानिन्छ, उसका
राजनीतिक गतिविधिले आम नागरिकलाई पछिल्लो समय जसरी निराश बनाएको छ, यसअघि सायदै यस हदको निराशा महसुस गरिएको थियो । देश र जनताका लागि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति गायव भएको छ ।
प्रदेशनम्बर २ को राजधानीसमेत रहेको जनकपुरधामको पहिचानमाधार्मिक पक्ष सर्वाधिकउचाइमा छ ।देवी सीताको जन्मभूमिजनकपुरधाम नौलखामन्दिर भनेर चिनिने जानकीमन्दिरका कारण नेपालमामात्रहोइन, छिमेकीभारतमापनि प्रसिद्ध छ । यसकै कारण यहाँ दैनिकहजारौं पर्यटक आउँछन् ।
प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको विशेषता हो भने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा उन्नत लोकतन्त्रको विशेषता । तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई निकै विकसित र अग्रगामी दाबी गर्ने नेकपा एमालेलाई नेतृत्व चयनमा मतदान नगर्ने, प्रतिस्पर्धामा नजाने र
सुरक्षा निकायका राज्यका मेरुदण्ड हुन् । समाजमाहुने हरेक खाले समस्याको समाधानमा सुरक्षा अंगको प्रमुख भूमिका हुन्छ । सुरक्षा निकायलाई राज्यले स्वतन्त्ररूपमा छोडि दिनुपर्ने थियो । संसारका सबै मुलुकमा सुरक्षा निकायलाई
निर्माण सामग्रीमा लापर्बाही
विश्वका प्रसिद्ध शहर भौतिक निर्माणका कारण सयौं वर्षसम्म प्रसिद्धिमा रहेको पाइन्छ । सम्बद्ध मुलुकको पहिचानमा कलात्मक निर्माण र त्यसको भव्यताको पक्ष एकातिर रहन्छ भने सबलताको पक्ष अर्कातिर । सडक, पुल,
कोभिडले विश्व–सभ्यतामै गहिरो रेखा को-यो । विगतमा प्रथम विश्वयुद्ध वा द्वितीय विश्वयुद्धपछि आएको परिवर्तन भनेर सीमारेखा कोर्ने गरिएजस्तै ‘कोभिडको महामारीपछि’ भनेर कालखण्डको वर्गीकरण गर्नुपर्नेभयो । कोभिडको प्रहारले विश्वमा नयाँ अभ्यासहरू
राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताबारे पटक–पटक प्रश्न उठिरहेको छ । झारा टार्ने तरिकाले निर्वाचन आयोगमा वार्षिक आम्दानी खर्च पेस गर्ने गरेका दलहरूले कागजमा लेखिएको भन्दा सयौं गुणा बढी खर्च गरिरहेका हुन्छन्
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७–७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मुुुलुकमा हुने विभिन्न खाले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न परिचालित आयोगले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको भने देखिन्न । तर, पनि
सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको महाधिवेशन कार्यक्रमका कारण मुलुकमा एक प्रकारको राजनीतिक उत्सव शुरू हुँदैछ । कोभिडको लहर घटेसँगै पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा एमालेको महाधिवेशनका
सरकारले अघि बढाउने विकास–निर्माणको काम समयमै पूरा नहुँदा नागरिकले सास्ती झेल्दै आएका छन् । अलपत्र छोडिएका आयोजनाका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान नै गुमाउँदै आएका दृष्टान्त पनि छन् । सरकारले अघि
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको प्रश्नले यतिखेर चर्चाको शिखर छोएको छ । उनले राजीनामा दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा मुलुक विभाजित छ । खास गरी नेपाल बार एसोसिएसनको
जनगणना शुरू भएको १ सय १० वर्षपछि नेपालमा १२औँ जनगणना शुरू भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर शुरू भएको जनगणना १५ दिनसम्म
मूल सफा गर्ने कि टुटी ?
पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्नले पूरै देश तरंगित छ । प्रधानन्यायाधीशका साथै न्यायाधीहरुको सवालमा समेत पक्ष–विपक्षमा बहसहरु भइरहेका छन् । न्यायका लागि आम नागरिककोे आशा र भरोसाको केन्द्र रहेको
राज्यका तीनवटै अंगले आज जनतालाई अभूतपूर्व रूपमा निरास पारेका कारण राजनीतिक सत्तामाथि ‘कू’ हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी डा. सुन्दरमणि दीक्षितले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलमा